Obama:Go’aan cusub oo xakamaynaya hubka Amerika – Kasmo Newspaper
Obama:Go’aan cusub oo xakamaynaya hubka Amerika
Updated - January 2, 2016 9:31 am GMT
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama,wuxuu dhowaan ku gaaray go’aan,in uusan iska daawan mar dambe dilalka ka socda Amerika sannadahaan dambe.
Markii Kongareyska Maraykanku ka gaabsaday,isaga oo la hayste u noqday,Kooxaha qalqaalada ee loo yaqaan “Lobby Groups”,wax ka qabashada hubka,ayuu Madaxwenuhu ku tala galay,in uu tillaabo goonidiisa ah qaado.
Ka dib markii xal heshiis lagu yahay la waayay, Mr.Obama,wuxuu samaynayaa markaan, isaga oo hareer maraya Kongreska, wax kasta oo awooddiisa ah oo, sharcigu u oggolyahay,si loo xakameeyo isticmaalka hubka.
Khudbaddii ugu horreysay 2016ka ee toddobaadlaha ahayd ayuuna qoysaska Maraykanka ugu sheegay in,ballan qaadkiisa sannadka cusub,oo ah kii u dambeeyay xilkiisa,uu doonayo dhammaystirka hawlaha qabyada ah.
Waxaa ugu horreeya go’aan cusub oo lagu joojinayo iibka bastooladaha iyo noocyada qoryaha,oo ay ku jiraan kuwa ciidammada,oo loogu tala galay goobaha dagaalka,laakiin lala dhex marayo dariiqyada Amerika.
Obama wuxuu sheegay,in uu waraaqo dhambaallo ah oo tira badan ka helay waalidiin,bareyaal dugsi iyo carruur,lagu weydiisanayo,in uu tillaabo qaado.
Ballanta u horreysa waa Isniinta,4ta bisha,oo uu la kulmi doono Xeer-ilaaliyaha Guud Loretta Lynch,si loo diyaariyo,ku dhawaaqidda go’aanka,oo ku began dhammaadka toddobaadka dambe.
Mowjado Dikareetooyin ah oo ka dhigan weerar an hore loo arag oo ku wajahan kooxaha awoodda badan ee qalqaalada “Lobby”,kuwaas oo Kongreska ku cadaadiya in an arrimaha hubka faraha lala galin.
Waa qorshe Aqalka Cad intii muddo ah uu ka shaqaynayay,oo an wali si tifaftir ah loo soo bandhigin,waxaana ka mid ah xoojinta habka “Background Check”oo lagu hubinayo qofkii hub iibsanaya,wixii raad dunuub iyo caafimaad oo uu leeyahay.
Wali lama oga qaybaha kala duwan ee hubka noocyadiisa la xakamayn doono,kuwaas oo dhammaantood noqday qalabkii geerida dadkii ugu tirada badnaa.
Laga soo bilaabo “Columbia High School,Virginia Tech,Newtown Elementary School,Aurora Cinema” ilaakii ugu dambeeyayee “San Bernardino”,oo noqday weerar argagixis-nimo lugta la galay.
Laakiin Gobolka “Texas”sharci kol dhow ka dhaqan galay ayaa ka dhigay bandhig sidii filimmadii “Far West”,markii loo oggolaaday qof walba in uu si muuqata ugu soo labisto bastooladdiisa,isaga oo la maraya suuqyada,maqaayadaha,goobaha shaqada,iwm.
Dalka Maraykanka,in ka badan 40 Gobol ayaa sharci ahaan oggol,mararka qaar,in si xor ah oo an qarsoodi ahayn loogu labisto bastooladaha,laakiin Texas waxa ay hadda noqonaysaa Gobolka ugu weyn,oo 27 malyuun deggantahay,oo shrcigan dhaqan galiya.
Waxayna sannadka cusub ku dabbaaldageen bannaan-bax uu soo qaban qaabiyay Xiriirka “Open Carry Texas” oo ka dhacay Gobolka oo idil,magaalooyinka waaweyn sida Houston iyo Dallas.
Kumannaan qof oo bastoolado xiran ayaa magaalada Austin, Xarunta Barlamaanka hortiisa isugu soo baxay,si ay taageero ugu muujiyaan sharcigaan cusub.